Embassy of The Republic of The Union of Myanmar » Press Release and News
Archive for Press Release and News
ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (Myanmar’s Statement on the inter-Korean Summit)
by Admin on 10/05/2018 at 4:08 PM
Posted In: Declarations, Press Release and News
Press Release of the Ministry of Foreign Affairs in Response to the Statement made by Ms.Yang Hee Lee,United Nations Special Rapporteur on the Human Rights Situation in Myanmar.
by Admin on 05/02/2015 at 11:21 AM
Posted In: Press Release and News
Press Release of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar in Response to the Statement made by Ms.Yang Hee Lee,United Nations Special Rapporteur on the Human Rights Situation in Myanmar. Please download the attach […] ↓ Read the rest of this entry…
နိုင်ငံခြားသား အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် (PR) လျှောက်ထားခြင်း ( Permanent Residency (PR) System for foreigners )
by Admin on 19/12/2014 at 4:20 PM
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံြခားသားအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ၂၉.၁၂.၂၀၁၄ မှစတင်၍ အမှတ် (၁၁၁)၊ (၃၇)လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဌာနစိတ်တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နိုင်ငံြခားသား အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်သည့် www.mip.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ It is informed that the Republic of the Union of Myanmar is going to launchapermanent residency […] ↓ Read the rest of this entry…
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်(Press Release Concerning Myanmar Migrant Workers in Thailand)
by Admin on 23/06/2014 at 11:03 AM
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အသေးစိတ်ြမန်မာဗားရှင်းကို အောက်ပါလင့်တွင်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် Please Press Release Concerning Myanmar Migrant Workers in Thailand.Please download detail in English Version. Download Here
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၌ ၂၀၁၄ခုနှစ် မတ်လ(၂၆-၂၇)ရက်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဥ်ဖြစ်ရပ်များအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များနှင့် ဆက်လျဥ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်
by Admin on 23/04/2014 at 2:29 PM
သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရန် အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
Union Government to fully protect aid groups in Rakhine State
by Admin on 23/04/2014 at 2:22 PM
Please download for more information , Click Here
Press Release of Ministry of Health
by Admin on 23/04/2014 at 2:15 PM
Please download detail information for Myanmar Version Click Here Please download detail information for English Version Click Here
Press Statement in relation to the telephonic conversation between H.E U Thein Sein, the President of the Republic of the Union of Myanmar and UN Secretary General Mr.Ban Ki-moon
by Admin on 23/04/2014 at 10:32 AM
Please download English Version, Click Here Please download Myanmar Version, Click Here
မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ Mr. Tomas Ojea Quintana ၏မြန်မာနိုင်ငံသို့န၀မအကြိမ်လာရောက်ပြီးနောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍‌ပြောကြားခဲ့ခြင်းအပေါ် နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာနမှ တုံ့ပြန်‌ဖြေရှင်းသည့်ကြေညာချက်
by Admin on 28/02/2014 at 7:20 PM
မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ Mr. Tomas Ojea Quintana ၏မြန်မာနိုင်ငံသို့န၀မအကြိမ်လာရောက်ပြီးနောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍‌ပြောကြားခဲ့ခြင်းအပေါ် နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာနမှ တုံ့ပြန်‌ဖြေရှင်းသည့်ကြေညာချက် For more detail download Here!
Statement Issued by Ministry of Foreign Affairs of Myanmar in Response toaPress Statement made by The United Nations Special Rapporteur Mr. Tomas Ojea Quintana
by Admin on 28/02/2014 at 6:54 PM
Statement Issued by Ministry of Foreign Affairs of Myanmar in Response toaPress Statement made by The United Nations Special Rapporteur Mr. Tomas Ojea Quintana Mr. Tomas Ojea Quintana, the United Nations Special Rapporteur on the […] ↓ Read the rest of this entry…
Click here to cancel request
Myanmar Ministry Websites President Office (Myanmar) Pyithuhluttaw Ministry of Foreign Affairs Ministry of Hotels & Tourism Ministry of Home Affairs Ministry of Information Ministry of Religious Affairs Ministry of Culture Ministry of Trade &
e-Commerce Portal Ministry of Labour , Immigration And Population Ministry of Eduction Ministry of Health And Sport Ministry of Commerce Ministry of Industry
၂၀၁၉ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာသင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်အတွက် နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းအတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန်စာရင်းနှင့်အခန်းနေရာ အသိပေးကြေညာခြင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာသင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းအတွက် သူငယ်တန်း၊ ပထမတန်းနှင့် ဒုတိယတန်း ကျောင်းသားများအနေဖြင့် နှစ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ ထုတ်ယူ/ဖြည့်သွင်းရမည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန် အသိပေးကြေညာခြင်း
Commercial & Trade Affairs
Anouncement & News
15 ST Martin's Drive Singapore 257996
+(65)67352035 For Myanmar Citizens
+(65)67353164 For Visa
©2019 Embassy of The Republic of The Union of Myanmar | Back to Top ↑
This is the official website of Myanmar Embassy in Singapore